कांग्रेस बैठकमा चुनावी बहस: हुकुमी भएको भन्दै महामन्त्रीको धर्ना
काठमाडौँ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको चुनावी समीक्षा बैठक अन्तिमतिर आइपुग्दा आरोप–प्रत्यारोप झन् चर्किएको छ । सोमबारको बैठकमा बोलेका ११ मध्ये अधिकांश नेताले पनि आफ्नो पक्षको बचाउ र अर्को पक्षको आलोचना गरे । मानबहादुर विश्वकर्माले हारको दोष सभापतिलाई मात्रै दिन नहुने बताउँदा चन्द्र भण्डारीले
पूर्वडीआईजी निरौला पक्राउ, पूर्व आईजीपी अर्यालमाथि कडा निगरानी
काठमाडौँ । दुबईबाट अवैधरुपमा भित्रिएको ३३ किलो सुनको भरियाका रुपमा रहेका सनम शाक्यको हत्यापछि प्रहरीले उक्त काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा पुर्वडीआईजी गोविन्द निरौलालाई पक्राउ गरेको छ । उक्त सुन काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको टोलीले पुर्वडीआईजी निरौलालाई नियन्त्रणमा
कालीकोट । अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । तर, निःशुल्क बाँड्ने औषधि छँदै छैन । औषधि आपूर्तिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। -नरेन्द्रकुमार खनाल, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट टीकापुर अस्पताल टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता मागपत्र आइरहेका छन् । अभावको
माओवादीको निष्कर्षः एकताको मिति नतोकौं
काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बिस्तारित बैठकले पार्टी एकताका लागि अग्रिम मिति तोक्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । एकताका लागि अझै एक-दुई महिना लाग्नसक्ने बैठकको निष्कर्ष छ । बैठकपछि प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘ठ्याक्कै तिथि तोक्न
माओवादीका यी नेताले पाए अख्तियारबाट ‘क्लिन चिट’
काठमाडौँ ९ वैशाख । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं बहालवाला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारका पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसहित ५० जनालाई भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सफाइ दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार,
दोधारमा ओलीः पहिले चीन जाने कि मोदीलाई स्वागत गर्ने ?
काठमाडौँ ९ वैशाख । भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बेइजिङ पठाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिला चीन भ्रमण गर्ने कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्ने दोधारमा छन् । कान्तिपुर दैनिक लेख्छ– ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा चीनले ओलीलाई
रेल प्रतिस्पर्धामा चीन कि भारत अगाडि ?
काठमाडौँ ७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भयो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति
वर्षमा कति ठग्छन् यातायात व्यवसायी ?
काठमाडौँ ७ वैशाख । यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको दाबी यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक
राजदूत छान्दा योग्यता र आचरण हेर: सर्वोच्च
काठमाडौँ ६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड बनाई त्यसको अक्षरशः पालनासमेत गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सरकार फेरिएलगत्तै राजदूतको मापदण्ड बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सत्तारुढ दलले राजदूत नियुक्तिमा हरेकपल्ट
काठमाडौँ ६ वैशाख । नर्वे सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो स्वार्थ मिल्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको छ । नर्वेले विपतको बेला ठूलै सहयोग घोषणा गरेर सहानुभूति देखाए पनि त्यो आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई
काठमाडौँ ६ वैशाख । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको टेलिफोन लाइन काटेको छ । टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त बने । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, कतिपय कार्यालयले
एमाले–माओवादी एकताः मुद्दा फेरि संयोजन समितिमा
काठमाडौँ ४ वैशाख । वैशाख ९ का लागि तय गरिएको एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता औपचारिक रूपमा घोषणा हुने–नहुने मंगलबार बस्ने एकता संयोजन समितिको बैठकपछि टुंगो लाग्ने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, पार्टी एकतालगायत विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका
वैशाखदेखि उद्योग पनि लोडसेडिङ मुक्त
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणले वैशाखदेखि उद्योगसहित पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भएको छ । कारोबार दैनिकका अनुसार, डेढ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका र एक वर्षदेखि मुलुकभर सर्वसाधारणका लागि लोडसेडिङमुक्त बनाएको प्राधिकरणले वैशाख अन्तिम सातादेखि उद्योगलाई पनि लोडसेडिङमुक्त बनाउन लागेको
भूमाफियाले गरे अख्तियारको निर्णय नै कीर्ते
काठमाडौँ । भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा नक्कली निर्णय र चिठी तयार भएको तथ्य फेला परेको छ । गोप्य रूपमा तयार पारिएका त्यस्ता नक्कली लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षरसहितका निर्णय र चिठी कब्जामा लिएर अख्तियारले प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि बिचौलिया गिरोहको रहस्य खुलेको
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राजेश हमालले के-के गर्न भ्याए ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा पहिलोपटक कलाकारको सहभागिता गराइँदा सिंगो फिल्म इन्डष्ट्रीले सम्मानित महसुस गर्‍यो । कलाकारको तर्फबाट महानायक राजेश हमाल र दिनेश डीसीले यो अवसर पाएका थिए । तर, यी दुईको भारत भ्रमणको कुनै प्रयोजन भने देखिएन । भारतमा उनीहरुले कुनै अलग्गै विजनेस
विद्युतीय दुर्घटना बढ्यो
काठमाडौँ । विसं २०६८ को असारदेखि अहिलेसम्म ७५२ विद्युतीय दुर्घटना भएका छन् । विद्युतीय दुर्घटनाबाट शारीरिकरुपमा अंगभंग भएका व्यक्तिको उपचार खर्च र मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म रु १२ करोड २० लाख खर्च गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सोसाइटी
सरकारले अयोग्य झैं मूल्याङ्कन गरेपछि भक्कानिए ३६ वर्ष पढाएका टेकनाथ
काठमाडौँ । अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका पर्याय बनेका कास्कीका टेकनाथ गौतम अन्तत ३६ वर्षे शिक्षण पेशाबाट खालीहात विदा भए । ३६ वर्ष ६ महिना १० दिन लामो शिक्षण पेशाको अवधी पूरा भएपछि उमेर हदका कारण उनले शिक्षण पेशाबाट अवकाश पाएका हुन् । कास्कीको धिताल गाविस १, भिडाबारीका गौतमले २०३५ सालमा कास्कीकै पृथ्वीनारायण
सरकारले ढाँट्यो भूकम्पपीडितलाई, थप १ लाख अनुदान हल्ला मात्रै
काठमाडौँ । राजधानीबाट प्रकाशित आजका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । केहीले राजनीतिक विषयलार्इ बढी जोड दिएका छन् भने कुनैले आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, स्वास्थ्यलगायत मुद्दा उठाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले संघीय संसदले सुझावविपरीत समिति थपेकोलाई मुख्य
तलब भत्तामै सकिन्छ वार्षिक साढे ५ अर्ब
काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले अलग–अलग विषयहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । मुख्य दलको आन्तरिक प्रजातन्त्रदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका दातृ राष्ट्र राष्ट्रहररूले वचन पूरा नगरेकोसम्मका खबर आजका पत्रपत्रिकाहरुमा छन्
ईयूद्वारा सार्वजनिक चुनावी प्रतिवेदनको चौतर्फी आलोचना
काठमाडौँ । गत मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेश निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको युरोपेली युनियन (ईयू) पुनः विवादमा तानिएको छ । ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभामामा खस आर्यलाई समावेश गर्न नहुने’ ईयूले दिएको सुझावलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको हो । ईयूले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व
ओली–देउवा दिनभर लुकामारी, के के भयो ?
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली बिहीबार बिहान ९ बजे राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको देशवासीका नामका गरेको सम्बोधन सकिएको थिएन। ओलीले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्ताव गर्दै
कामचलाउ मन्त्रीका गोजीबाट सूची झिक्दै, सहिद तोक्दै
काठमाडौं : मुलुकका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरूलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले आफूखुसी सहिद घोषणा गर्न थालेको छ । कामचलाउ सरकारले कुर्सी छाड्नुअघि मन्त्रीको गोजीबाट नाम निकाल्दै सहिद घोषणा गर्न अग्रसर रह्यो । गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उमेश ढकालले मापदण्ड नै नभएकाले सहिद घोषणा प्रक्रिया वैज्ञानिक